Amazon သည် Echo စပီကာတစ်ခုလုံးကို Alexa | Gadget သတင်း
Karim Hmeidan | | အမေဇုံ, နေအိမ်အလိုအလျောက်
2019 သည်စမတ်ပီ၏အဓိပ္ပါယ်ပြည့် ၀ သောနှစ်ဖြစ်တော့မည်အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည့်အတုဥာဏ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ 2019 လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာစပိန်မှာအခြေချနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မှာစျေးကွက်ထဲမှာအဓိကအသိဉာဏ်စနစ် (၃) ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ Google Home, Apple's HomePod နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Amazon Echo.
ထိုအအတိအကျအဆုံးသည်ငါတို့ယနေ့ဆောင်ခဲ့သောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်စနစ်၏ Alexa, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံသယကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လိမ့်မည်ဟုစက်ပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသောဌန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာဆင်းသက်။ ခုန်ချပြီးနောက်တွင်သင့်အားစပီကာအသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည် ပဲ့တင်သံ Que အမေဇုံသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်... ဟုတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားကစပီကာတစ်လုံးရဖို့စဉ်းစားနေရင် Amazon Echo ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ တစ် ဦး မြှင့်တင်ရေးစျေးနှုန်းနှင့်အတူဖြန့်ချိ။
1 ပဲ့တင်သံ, အမေဇုံရဲ့အထင်ကရ
2 Echo Plus, စမတ်ပါဝါ
3 Echo Dot နှင့် Echo Spot၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သည်
4 Amazon ရဲ့ Echos ကျော်လွန်ပြီး Alexa
ကြောင်းစမတ်စပီကာတန်းတူထူးချွန်ရှိလျှင် အမေဇုံ: EchoAmazon ၏အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ပြီးတော့ "smart" ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ Apple's HomePod Cupertino စပီကာနဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကွာဝေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဖို့ကွိုးစားရုံပဲလုပ်ရမယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး acoustic အတွေ့အကြုံ ၁၀ ခုပေးတဲ့စပီကာကိုအမြဲတမ်းရှာနေတာမဟုတ်ဘူး၊ သင်စဉ်းစားရမယ်၊ သာမန်အချက်ကတော့စမတ်စပီကာကို ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျလိုချင်သည်၊ ထိုအရာသည် Echo မိသားစုရှိမည်သည့်စပီကာကို Alexa နှင့်အတူလုပ်သနည်း၊ သို့သော် Amazon Echo ၏ကောင်းမွန်သောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့လည်းဖြစ်သည် အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်.
လှပသောဒီဇိုင်းသည်တိုးတက်နိုင်သော်လည်းလှပသောအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအသံကိုစုံလင်ခြင်းသို့ပို့သည်။ Echo မိသားစုရှိအခြားစပီကာများကဲ့သို့မိုက်ခရိုဖုန်း ၇ လုံးက c နေသောသူများဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကို Alexa ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောဖို့စောင့်နေတယ်ထိုအချိန်တွင် Amazon နှင့်အထူး Alexa သည်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသမျှကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြီးသားဒါဝိသေသ တောက်ပသော Halo သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Amazon Echo ၏အခြေအနေကိုအချိန်တိုင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သင်သည်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။
Echo Plus, စမတ်ပါဝါ
အကယ်၍ အမေဇုံပဲ့တင်သံသည်ဘီဇို့စ်ယောက်ျားများ၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ပဲ့တင်သံ Plus အား ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောစမတ်စပီကာတွင် update ဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်နှင့်အတူလိုက်ဖက်သည့် Plus အားရှာဖွေခြင်း၊ သူ့ညီနှင့်မတူသောအရာကိုရှာဖွေခြင်းထံကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူအဆင့်မှာများများစားစားမရှိပါဘူး။
ထိုသို့အသံအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Echo Plus သည်အနည်းငယ်ကြီးမားသောစပီကာများရှိခြင်းဖြင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်, အလယ်အလတ်အခန်းတစ်ခန်းကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနှင့်လည်းပိုကြီးတဲ့နေရာများဖုံးလွှမ်းရန်အခြားအမေဇုံ Echos နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ Echo Plus နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ Zigbee home automation controller ကိုထည့်သွင်းထားတာပါ သင့်ကို smart devices တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် Philips Hue ကဲ့သို့သောအလယ်အလတ်တံတားများမလိုအပ်ဘဲ (အခြား smart gadget များ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်စေနိုင်သည်) ။
Amazon Fire Stick TV ဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းကို room ည့်ခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကပြောဆိုသူဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Stick ကို Alexa ဖြင့်မထိန်းချုပ်နိုင်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သော်လည်းဟုတ်ပါသည် Echo Plus နှင့် Bluetooth မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းတွင်အသံစနစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မလိုအပ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စပီကာ။
ငါ Amazon Echo Plus ကိုအကြံပေးသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်၏အိမ်ကိုစမတ်ကျသောအိမ်ဖြစ်စေရန်စဉ်းစားသောအခါဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး smart gadget တွေလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပါ။ မရရှိလျှင်သာမန် Amazon Echo ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ Speaker ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Echo Plus ကိုကျွန်တော်တို့ပိုကြိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်။
Echo Dot နှင့် Echo Spot၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သည်
ငါတို့ပြောမယ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျွန်ုပ်တို့သည် Echo Dot နှင့် Echo Spot အကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုပေမယ့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပူးပေါင်းမည်။ Echo Dot သည် Alexa နှင့်အတူစျေးအသက်သာဆုံးသောစပီကာများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းတွင်စမ်းသပ်ခြင်းသည်လက်ခံနိုင်သောအသံကိုပေးသောစပီကာသေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။ ဒီဟာကအကောင်းဆုံး Echo Dot သည် minijack မှအသံထုတ်ပေးသောအိမ်တွင်ရှိသည့်အခြားစပီကာတစ်ခုနှင့်၎င်းကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် Echo Dot ထဲက Alexa နည်းပညာကိုသုံးပြီးဂီတကိုနားထောင်ချင်တဲ့စပီကာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် Echo Spot, စပီကာသေးသေးလေးလည်းပါရှိသည်နှင့်ငါ့ကိုသင်ပြောပြရန်ခွင့်ပြုပါ Echo ကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ သူလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ရာစားပွဲ၏ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်သို့မဟုတ်ငါတို့စားပွဲစားပွဲမှ။ အမြင်အာရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုပြုပြင်နိုင်သည် နေပြည်တော် လက်မှာအချိန်ရှိဖို့, ဒါမှမဟုတ် ၏ပုံစံအတွက်လက်ခံရရှိသည် Alexa ကျွမ်းကျင်မှုမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုဗီဒီယိုရိုက်ပါ (ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီစေရန်နောက်ဆုံးပေါ် Alexa ပရိုဂရမ်ငယ်များ) သူပေးထားသောအသံသည် Echo Dot နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သို့သော်မျက်နှာပြင်ရှိရန်မှာ Alexa Alexa ထက်မြင့်သောအဆင့်သို့ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မမေ့လိုပါ Echo Sub သည် Amazon Echo ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည် Amazon ၏ကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားများမှဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ကြောင်း audiophile တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိုးမြှင့်မယ်လို့ 100w ပါဝါ subwoofer ငါတို့အမေဇုံပဲ့တင်သံနဲ့ရနိုင်တယ် ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Amazon Echo တစ်ခုတည်းကအသံကျယ်သံကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နှစ်ခုကို Echo Sub နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အတွေ့အကြုံကအတော်လေးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ အမေဇုန်တင်ဆက်မှုကာလအတွင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ 2.1 ပုံစံနဲ့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အမှန်တရားကတော့ဒါကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံလေထုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
Amazon ရဲ့ Echos ကျော်လွန်ပြီး Alexa
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအတော်များများက Alexa ကိုသင့်အိမ်ထဲ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ချင်သော်လည်းသင် Amazon ရှိသည့်အခါ Amazon မှပြုလုပ်သောစပီကာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တွန့်ဆုတ်နေတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူများထံမှများစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာ။ အမေဇုံသိတယ်၊ အမေဇုံဘာမသိတာလဲသိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစပီကာတွေပြောစေချင်တယ် Alexa ထုတ်လုပ်သည့်အခြားထုတ်လုပ်သူများ။
ကျွန်တော်တို့ဟာကျော်ကြားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆီကစပီကာတွေကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ် Harman သို့မဟုတ် Sonosစွမ်းအင်စနစ် (သို့) Hama ကဲ့သို့သောပိုမိုတတ်နိုင်သည့်အခြားကုမ္ပဏီများအပြင်အမှန်တရားမှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ Alexa ရဲ့နည်းပညာက Amazon Echo စပီကာတွေထက်ကျော်လွန်သွားတာပဲ။သူတို့ကို Jabra (သို့) Bose အမှတ်တံဆိပ်များမှသင်မြင်ရသောနားကြပ်များ၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သည်Amazon ၏ virtual assistant နှင့်အဆက်အသွယ်အမြဲပြုလုပ်နိုင်သည့်နားကြပ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ Operation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Siri နဲ့ Google Assistant တို့မှာပြသနာတွေမရှိဘဲအရိပ်အောက်မှာတွေ့နိုင်တယ်။
ငါတို့ပြောပြီးပြီ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Amazon Echo အသစ်ကို Alexa ဖြင့်စမ်းသပ်လိုပါကသို့မဟုတ် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုကြိုးစားလိုပါကဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအသုံးချရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အမေဇုန်မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်၊ သံသယမရှိဘဲအရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်နည်းပညာကိုသင်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » အမေဇုံက Alexa နဲ့အတူ Echo စပီကာတွေအကုန်လုံးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်